पृथ्वीनारायण एक कालजयी इतिहास ! – BikashNews
२०७७ माघ २ गते ८:२८ रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
२०६३ सालमा भर्खर भर्खर राजतन्त्रलाई ढालेको झोँकमा ‘पृथ्वी जयन्ती’ नमनाउने घोषणा भयो । ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ मनाउँदा राजावादी शासनलाई प्रश्रय दिएको प्रतीत हुन्छ भन्ने मथिङ्गल बोक्नेले एउटा कालजयी इतिहासलाई लत्याउने त्यो लज्जास्पद निर्णय गर्यो । आज नेपाल र नेपाली रहनुको कालजयी इतिहासलाई झिनो स्वार्थमा रम्नेहरूले चक्मा दिएको दुखद् अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको अर्थ निरङ्कुश शासनलाई प्रश्रय दिइनुपर्छ भन्ने अर्थमा कदापि होइन । १७७९ मा जन्मेका मान्छेलाई २०७७ मा चर्चा गरिरहँदा त्यही समयको परिवेश र क्षणसँग हेर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि अहिलेका हामी बौद्धिक भनाउँदामा पनि भएन । त्यसैले पृथ्वीनारायणको गरिमालाई आमाचकारी गाली गर्नेले नबुझेरै गाली गरे ।
जसरी मदनलाई बिर्सन सकिँदैन, जसरी वीपीलाई सम्झनुपर्छ त्यसैगरी राजा कि राष्ट्रनिर्माता भन्ने हल्ला मच्चाएर राष्ट्रनिर्माताको इतिहास लुक्दैन । विश्वमा अमेरिका, युरोप भनिएका विकसित क्षेत्रले गोर्खाली सान र स्वाभिमानलाई उँचो मान्छ । विनास होइन, क्रान्ति होइन बुद्धत्वको सिंगो सारलाई मनन गर्छ । इतिहासका पानामा पृथ्वीनारायणको दूरदर्शितालाई जाँच्छ । भारत र चीनलाई हिजो दुई ढुंगा र नेपाललाई तरुलको संज्ञा दिएर सचेतनाको गहन भाव त्यसै पोखेका होइनन्– पृथ्वीनारायणले । दिव्योपदेशका पानाभरि दिगो विकास र सुशासनमा जनताप्रेमको सुगन्ध छर्लङ्गै छ । हामी बडप्पनको लक्कु बोकेर देशको झन्डाभित्र पुर्खाको गरिमालाई गलहत्याउँदा लाज र डरै मान्दैनौँ तब कुतर्कले सत्यता किन छोप्नुपर्याे र !
हामीले पढ्दै आएका छौँ– नेल्सन मन्डेलाले पनि विद्रोह गरे तर कालाजातिलाई मात्रै एकोहोर्याएनन् बरु सबैलाई मानवीय सद्भाव र सम्मान गरे । यस मानेमा संसारमा आज पनि त्यो एक नाम उदाहरणीय छ । जनआन्दोलन केका लागि हो र पृथ्वीनारायण को हुन् भन्ने विषयमा बहस गर्नुपूर्व आफ्नै अग्रज आमाबाबा, हजुरबालाई सम्झे पुगिहाल्छ । हिजो सालिक तोडेर उपद्रो मच्चाउनेलाई इतिहासको गरिमा र राष्ट्रभक्ति थाहा भएन । कसैको उक्साहटको मुङ्ग्रे बलले वितण्डा मच्चाउनेले एकताको सिको गरेको भए सायद समाज परिवर्तनको गाडी निकै अघि दगुरिसक्थ्यो होला । तर, त्यसो भएन । केवल अर्काका सिद्धान्त प्यारा भए । आफ्नी आमाको गालामा भएको खोट बोकेर अर्काकी आमाको आचरणै थाहा नहुनेले गल्र्याम्म अँगालो हाल्न पुगेको देखियो । त्यहाँ राष्ट्रप्रेमको मियो नै स्वार्थको आडमा जटित हुन पुग्यो ।
बिलो लिएझै शरमा उनेर
राष्ट्रिय एकता दिवस कुनै पार्टी, राजतन्त्रको वकालत गर्ने वा कुनै शासन पद्धतिलाई पक्षपोषण गर्ने पाटोबाट एक, दुई जनाको नेतृत्वभित्र खुम्चिएको संकीर्णतावादी आवाज होइन । यो सिंगो नेपालको कालजयी इतिहासको मेरुदण्ड हो । अलिकति राष्ट्रकविको मर्मतिर ध्यान दिँदा सत्यता नियाल्छु मः
दलमर्दनको सोचलाई पृथ्वीनारायणको महानताले बोध गराउँछ । उनमा भएको दूरदर्शिता र निःस्वार्थताले राष्ट्रिय स्वार्थलाई बोल्छ ! ‘देशका महाजनलाई गोड प्रसाहदेखि उँभो आउन नदिनु । देशका महाजन हाम्रा मुलुकमा लाया भन्या दुनिया कंगाल गरी छाड्छन्’ दिव्योपदेशभित्र देशप्रेम छैन र ! युद्धको डोरो र रक्तपात होस्– आज त नेपाली एकतामा व्यक्ति, सम्प्रदाय र जातिको संकीर्णता थोपरिएका छन् । सार्वभौकिताका कुरा गर्दै भ्रष्ट चरित्रले केवल आडम्बर पस्कँदा राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानमा प्रहार हुन्छ । नेपाली मनलाई नियाल्दा सायदैले सोच्लान्– ‘म अब पृथ्वीनारायणको योगदान भुल्न सक्छु ।’ एक दिनका लागि मात्र पनि उसको नाम लिनलाई भारी लाग्छ । यो देशले इतिहासलाई कसरी सम्मान गर्ला ? राष्ट्रकविले आफ्नो राष्ट्रियताको मर्मस्पर्शी खण्डकाव्यभित्र पृथ्वीनारायणको राष्ट्रिय भावनालाई जगाएका छन् । भाइ दलमर्दन शाहको सोचभित्र घुसेको व्यक्तिवादितामा सङ्कीर्णता स्पष्ट भेटिन्छः
पृथ्वीनारायणले भाइको वचनलाई नमान्नु राष्ट्रिय स्वार्थ हो । केवल खिचातानी, संक्रमण र अन्योलको घनचक्करमा देश सधैँ रुमल्लिरहँदा नेपाली र नयाँ नेपाललाई भौतिक उन्नतिमा लगेर साँघुर्याइएको आभास हुन्छ । आधुनिक नेपालको मानचित्र बदल्ने ऐतिहासिक अभियानको प्रारम्भिक इतिहासलाई वि.सं. १८०१ मा प्राप्त नुवाकोटको विजयले आरम्भ गर्यो । तत्कालीन छिमेकी देश लमजुङ र कास्कीसँग मित्रताको हात फैलाउँदै हातहतियार तथा सैनिक सुधार गर्ने रणनीतिको सबल प्रयास थियो– नुवाकोटमाथिको विजय । मकवानपुर विजय, कीर्तिपुरसँग तेस्रो पटकको प्रयासबाट मात्रै जालझेबाट प्राप्त विजय होस् या मिरसिक्का अभियानमा देखाइएको वीरता आखिर त्यहाँ गोर्खाली सान र स्वाभिमानको इतिहास छ । कीर्तिपुरको युद्धमा काजी कालु पाण्डेजस्ता शूरवीर व्यक्ति मारिए, जयन्त रानाले निर्मम रुपमा छाला काढिएर मर्नुपर्यो, शूरप्रतापले कानो हुनुपर्यो, इतिहासले यही क्रोधाग्निको प्रतिकारमा पृथ्वीनारायणद्वारा धेरैको नाक कान काटेर बदला लिएको घटनालाई बोले पनि इतिहासकारहरूको मतमा यी नेपालबाट निस्कासित क्रिस्चियन पादरीहरूद्वारा गरिएको अपव्याख्या थियो । उपत्यकाबाट अंग्रेजको राजनैतिक कुचाला लघारियो । उपत्यकासँगै पूर्वका सेन राज्य चौदण्डी र विजयपुर क्षेत्र नेपालमा गाभियो । फलतः किरात र लिम्बूवान् प्रदेशका राजाले गोर्खाली झण्डामुनि एकै साथ बस्ने अपेक्षा बोकेर आत्मसमर्पण गरे । तबदेखि ‘मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन । सबै जातको पूmलबारी हो’ भन्ने महान् अभिव्यक्तिसँग हामीले स्वाभिमानको उच्चतामा रम्न पाइरहेका छौँ । सैनिकले कदर पाए । कालु पाण्डे, कीर्ति शाह, तुलाराम पाण्डे, रामकृष्ण कुँवर, केहरसिंहजस्ता योद्धाले यो संग्रामको महायज्ञमा दिलो ज्यान दिए, एकीकरणको सपना साकार पार्नका निम्ति कसुर छाडेनन् ।
राष्ट्रकविले कवित्व भावमा ऐतिहासिक गाथामा राष्ट्रिय गौरवको अखण्ड, सुन्दर र सिंगो नेपाल निर्माणको योगदानलाई उरालेका छन् । चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपाली झन्डाको अस्तित्व अटल रहनुको देन पृथ्वीनारायणलाई जान्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । बुद्धको बुद्धत्वमा शालीन शान्तिको दीप जलोस् या पृथ्वीनारायणसँग गाँसिएको वीर गोर्खालीको इतिहास– नेपालीपन शान्ति र क्रान्तिको आफ्नै पाटामा जीवन्त छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका ठूला देशले वीर गोर्खालीलाई किन चिन्छन् ? पृथ्वीनारायण कसरी राष्ट्रनिर्माता बन्न सक्दैनन् र ! यो देशको कीर्ति परदेशसम्म पुर्याउन बहादुरी पस्कने पृथ्वीनारायणको पसिना र रगतको बलिदानीलाई स्वाभिमानी देशले सदैव सम्मान गर्न जान्नुपर्छ ।